आईजीपी अर्यालको आक्रोश: ईन्स्पेक्टरले आर्इजी फेर्ने कुरा गर्ने?
सुवास गोतामे सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 19882 पटक पढिएको
काठमाडौं: प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालले आफूलाई फेर्न लागेको हल्लाको पछाडी नलाग्न मातहतलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार बिहान प्रहरी मुख्यालयमा निर्वाचन सुरक्षा ‘ब्रिफिङ' का लागि भनेर बोलाईएको मिटिङमा उपत्यकाका प्रहरी निरीक्षक कमाण्डर हुने कार्यालयदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बस्ने सबै कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘चुनाव आईरहेको छ। तपार्इहरु आईजीपी फेर्ने ध्याउन्नमा लागिरहनुभएको छ। आइजीपी फेर्ने काम तपाइँहरुको हो र? प्रहरी निरीक्षकसम्मका दर्जा आईजीपी फेरिन्छ भन्दै हिंडेको सुनेको छु। कारवाहीका लागि तयार रहनुस्,' अर्यालको भनाई उदृत गर्दै वैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतले भने,‘ सुपर हिरोईज्मका लागि सामाजिक सञ्जालमा आईजीपी फेर्ने समाचार प्रकाशन गर्न लगाएर के गरेको? कसैले कसैलाई बनाउने होइन।'
अर्यालले प्रहरी नियमावली २०७१ ले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको भन्दै 'कुरा भन्दा काममा लाग्न' सुझाएका थिए । चुनावको मुखमा जिल्ला बाहिर मात्रै घटना भएको भनेर चुप लागेर नबस्न अर्यालले प्रहरी अधिकृतहरुलाई सजक रहन निर्देशन दिएका थिए।
उनले भने,‘ निर्वाचनमा आम नागरिकको चाहना ढुक्कले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका अहम र विशिष्ठ छ। निर्वाचन सुरक्षाको मात्रै पछि लाग्दा अन्य अपराधले प्रशय पाउला, सबैतर्फ सतर्कता अपनाउनोस।'
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज नेउपानेले निर्वाचनको सुरक्षाको विषयलाई लिएर उपत्यकाका प्रहरी ईन्चार्जहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ गरेको बताए। उनले भने,‘ चुनावी माहोल छ। प्रहरीको भूमिका अहम् छ। आईजीपी सा'बले सबै प्रहरीलाई गफ भन्दा व्यावसायीक ढंगले काम गर भनेर निर्देशन दिनुभएको हो।'
ल्यान्डमार्क होटलमा सामूहिक 'बलात्कार': पक्राउ परे मुख्य आरोपी 2622
न्युरो अस्पतालमा तिघ्राको अप्रेसन गर्दा बिरामीको मृत्यु 4988
श्रममन्त्री भन्छन्ः सिन्डिकेट लाउनेको दिनगन्ती सुरु भयो 2703